Yini ngendololwane kwesokudla? Ngena ngemvume noma ukulimala?
ngezinye izikhathi equlekile, iminyakazo ngokwawo kuholele emizweni ubuhlungu, futhi kulandelwe ezinye izenzakalo. Abantu iyona eside ebuka futhi ihlaziye. Ngokwesibonelo, lokho kusho ngendololwane kwesokudla? ngakho kukhona uphawu. Akuve okuhle ngendlela engakholeki. Kuyathakazelisa ukuthi udlalwa cishe wonke. Siyini isizathu? Asivume.
Ukulimala futhi izimpawu kazwelonke
indololwane sakhe sokunene, njengoba besho, kusho ukuthi umuntu ecabanga. Uyazi, akufanele zibangele noma iyiphi izinhlangano edabukisayo. Imicabango lowo alibekele wena ngentambo engabonakali esinomdlandla, okuhle kakhulu. Ngakho abantu bathi okwadingeka ubuhlungu ngendololwane kwesokudla. Ngena ngemvume, ngasendleleni, it has a umphelelisi, okuyinto ambalwa abantu bazi.
Kukholakala ukuthi amandla omuhle yokucabanga kanye engaziwa umphuphi incike lokujabulela ubuhlungu. Uma, ngemva ukungqubuzana iyiphi into nje wagcoba indololwane wakhe, khona-ke kancane nje ukukhunjuzwa wena. Ngokwesibonelo, lo mfundi ezikude kwafika engqondweni yakho njengoba umsiza baxazulule puzzle kunzima ukulawula, noma kwenzeke ngokuphazima kweso boss wanquma sihlaziye umnikelo labasebenzi imbangela. Qiniseka une ke egqanyisiwe ngomqondo omuhle, uma lokhu kwenzeka esikhathini ngendololwane kwesokudla. Ngena ngemvume, ngeshwa, alisho lutho mayelana nokuthi ungubani lowo muntu ogama engqondweni umfanekiso ngeshwa "isisulu" okukhulunywa ngaso ezimhlophe. Ngiyazi ukuthi kungaba kancane ngemva kokubukela izenzakalo.
Okusho kwemamaki ubuhle abasha
Kunabantu nezinye emagama Lisho ukulinyazwa. Bathi intombazane lithembisa reciprocity cishe Cavalier, manje athatha engqondweni yakhe. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze unqume ukuthi ubani MIL ubuhle uma engazala ngendololwane kwesokudla. Ngena ngemvume imele kanje: Cavalier ubona omuhle, amaphupho lokuhlangana. Ngiyavuma, kuyajabulisa ukuthola izindaba ezinjalo. Kuyinto, uma kukhona, kancane ngidambise izinhlungu. Kunamandla kangakanani, umnumzana kushisekela kakhulu nemicabango romantic. Vele awabashayi ngamabomu kokubanga kungadaleka ingozi embi kakhulu! Isebenza kuphela uma izenzakalo ezingahleliwe Omen. Elbow ukuqagela imicabango eyingoduso - oyisiphukuphuku.
Nithini intombazane ayikahlanganiswa wahlangana isikhulu wakhe? Abantu bathi, kubalulekile kuqala zimemeza eyafika ikhanda lakhe, igama womuntu. Yileyo ndlela esizwa ngayo bayobiza umfana ukuthi "isisulu" ukuphila imisiwe. Ngaphambili sasikholelwa ngalesi. Futhi, uma ufuna, zama ukuhlola. Ngaphandle-ke, ukwazi ukukhumbula lokhu ithiphu lapho ubuhlungu ngokuzumayo abagwazwe endololwaneni. Memeza igama kufanele kube ngalesi sikhathi, ngaphandle kokuma yesibili. Uma buhle kungabenta hit ephusheni, ngokushesha ukushada, ukholwa kwezinye izizwe.
Kuthiwani uma enye inhlangano kwahlaselwa?
Ungaqiniseka mayelana indololwane kwesokunxele, futhi, kufanele ukuhumusha okungokwakhe. Nokho, akuzona elikhulu. Sekuyisikhathi eside abantu wazama ukuthola ukuthi hit indololwane kwesobunxele noma kwesokudla. Izimpawu futhi ufinyelele nakithi.
Ngakho, endololwaneni ngakwesokunxele, njengoba besho, lihlotshaniswa imizwelo engakhi ukuthi umuntu uzizwa maqondana kulowo ohlushwa yikho. Man wawanika isiyalo esithambile noma ethukuthele ngenxa nawe. Girl awawabheki reciprocity ozithandayo, uma ngokuvamile eshaya ohlangothini lwesobunxele. Lena sokuthi lo muntu akazange asijabulele ukuziphatha kwakhe noma ukubukeka. Ngezinye izikhathi kuthiwa bafike endololwaneni kwesokunxele kubonisani disassembly futhi amahlazo. Uma yena wayehlushwa isifo ukulimala, nobuhlungu obungokwenyama ungakwazi ukwengeza futhi umphefumulo kwengxabano nomuntu oseduze.
Okusho izimpawu ze-amadoda
amadodana emincanyana uqine ka-Adamu Folk ukuhlakanipha akubikezeli ngemva kwalokho we "ukulimala." Akunandaba ukuthi hlobo luni ukulimala indololwane. Uma abakwazanga ukubala sezimoto ishayisana izindlela isithiyo, empilweni azikho band ezinhle kakhulu. Ingabe sokulungisa izinkinga, ukuze baphakamise emalungelo ato. Uma emva ukushaya etafuleni wawa izitsha - alindele izingxabano emkhayeni. Uma emva amapuleti phansi fly ukudla isinkwa, nehlazo kungenzeka ezinkulu. Kodwa ukushaya odongeni noma iKhabhinethi kubonisani enkingeni nabalingani noma abangane. Abesilisa kufanele baqaphele ngokukhethekile ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.
Kungenzeka yini ukuvimbela ukuphelisa ituthuko engakalungi?
Izimpawu, ngokuvumelana abezenhlalakahle, abathola isahlulelo, ngoba sisuke sipha ngokwakho ukufakwa lomcimbi, lindela it. Lokho lutho embi, kutuswa ukuba uwuhlikihle esitho obukhulu futhi niyathandaza. Abantu bakholelwa ukuthi lokhu ungasuki kuye okungekuhle, okusikisela enganakile. Phela, lokho ncamashi ke odlulela ukuba khona ukungakhululeki okuthile. Ngokuqinisekile zokusebenza kwengqondo futhi uyavumelana nala iseluleko.
Lokungasisho umthandazo, indoda reorients enganakile siqu yemicimbi ezinhle. Ngakho, uphawu ngeke zisetshenziswe. Kunoma ikuphi kuwufanele ngizame. Ngemva luvungazele kulula umthandazo kuka ukwenza enkingeni. Sifaka ukuthi, ngaphezu ekutholeni umnyombo walokho intando, ngezinye izikhathi kuyasiza ukuba bahlole ukulimala.
Elbow - ngempela ingxenye ibe nokuzwela emzimbeni. Trauma kungaletha eningi izinkinga. Kungcono ukuba abayekise e ihlumela. Uma ubuhlungu iqhubeka isikhathi eside, kubalulekile ukuba aye kudokotela. Ngezinye izikhathi ngemva ukulimala ukuthuthukisa ukuxakeka. Ake ezinjalo, akuvamile, kodwa udinga ukulungisa. Ingabe uyavumelana nalokho?
Umthetho osemqoka zokuziphatha kulula ukuzwa inhliziyo
Saga okuhle nokubi njengoba indlela eqinisekile imfundo ekuphila nekutiphatsa emphakathini
Yiziphi izinzuzo nezingozi kokufulela okwesikhashana?
Indlela ukugcina amazambane emiphongolweni: amanetha, izikhwama, ngobuningi
Piter Krauch: Biography emfushane
Abalingisi "Piece engaphelele ngoba Piano Mechanical". Amazwana kanye nokubuyekeza of the movie
Ukupholisa imoto yepulasitiki: isinyathelo ngesinyathelo imfundo